Ny Pandaw Cruises izao dia mikatona ho an'ny asa soa noho ny COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Cruising » Ny Pandaw Cruises izao dia mikatona ho an'ny asa soa noho ny COVID-19
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Kambôdza • Cruising • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao Mafana Laos • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao Mafana Vietnam
Veloma amin'ny Pandaw Cruises
Nanambara ny Pandaw androany 26 Oktobra 2021 fa noho ny fitohizan'ny fiantraikan'ny COVID-19 amin'ny fitsangatsanganana fialamboly iraisam-pirenena dia tsy maintsy manidy ny varavarany izy.
Nitsahatra ny toerana halehana amin'ny dia an-tsambo any Vietnam, Kambodza, Laos ary India.
Ny toe-draharaha ara-politika ao Myanmar dia nandray anjara tamin'ny fanakatonana ihany koa.
Ny orinasa dia tsy manana safidy afa-tsy ny hampitsahatra ny asa fitsangantsanganana amin'ny renirano noho ny tsy fahampian'ny vola ara-bola sy ny tsy fahitana famatsiam-bola fanampiny taorian'ny krizy COVID-19.
Na dia nitoetra mafy aza ny famandrihana ho an'ny fanombohana indray tamin'ny taona 2022, miaraka amin'ny fanohanana lehibe avy amin'ny vondrom-piarahamonina Pandaw tsy mivadika hatrany, ny orinasa dia tsy manana famatsiam-bola hanohizana ny fametrahana ny sambon'izy ireo fito ambin'ny folo mandritra ny herintaona, ary avy eo dia mandalo fanavaozana ilaina mba hiomanana amin'ny asa fanavaozana. ny fotoana izay tsy azo antoka, na dia heverina fa mety hitranga amin'ny vanim-potoana ririnina 2022/23 aza izany.
Niasa tsy an-kijanona ny orinasa nandritra ny taona lasa mba hitadiavana mpampiasa vola vaovao na endrika ara-bola hafa hitondrana ny orinasa, saingy tsy nahomby.
Niorina tamin'ny 1995, ny Pandaw dia nanao ny asan'ny mpisava lalana mankany amin'ny renirano any Vietnam, Kambodza, Laos, Myanmar ary India miaraka amin'ireo sambo boutique malaza. Mandra-pahatongan'ny fiantraikan'ny COVID, Pandaw dia nankafy ny fanohanan'ny mpanaraka tsy mivadika amin'ny mpandeha, ny mponina be mponina ary ny fidiram-bola mitombo isan-taona miaraka amin'ny vokatra ara-bola tsara.
Paul Strachan, mpanorina ny Pandaw, dia naneho hevitra hoe: “Fotoana mampalahelo ho ahy, ny fianakaviako, ny ekipanay ary ny mpanjifanay izao. Manamarika ny fiafaran'ny vanim-potoana iray ho antsika rehetra taorian'ny 25 taona niainana tena izy. Tena malahelo tokoa izahay nandiso fanantenana ireo mpandeha mahazatra izay niandrandra mafy ny hanao dia taorian'ny fanafoanana ny famerana ny dia. Tena ratram-po ihany koa izahay ho an'ny ekipanay 300+ sy ny mpiasan'ny morontsiraka izay nijoro teo anilan'ny Pandaw ary nanantena ny handeha indray amin'ny herintaona.
Na dia eo aza ny fanakatonana ny Pandaw Cruises, ny Pandaw Charity, izay nanao zavatra betsaka tamin'ny fanohanana ny olona tao Myanmar nandritra ny krizy mitohy any, hanohy ny asany eo ambany fitarihan’ny mpiandraikitra azy.